Tuscan Country Detached House.Sanitized.WiFi Free - I-Airbnb
Tuscan Country Detached House.Sanitized.WiFi Free
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJonatha
Ngaba ufuna ukuchitha iholide yakho kwindawo eqhelekileyo yaseTuscan? Le yindawo yakho!Isibaya esinomtsalane esihlaziyiweyo seentsapho / amaqela. Ifakwe entliziyweni yelizwe laseTuscan kwi-2km ukusuka ePoggibonsi.Ilungele iholide yokuphumla kunye nendawo enkulu yokutyelela iSan Gimignano (13km), iSiena (25km), iFlorence (35km).
Ibhari enomtsalane, eqaqambileyo neyamkelekileyo esanda kulungiswa ngeembono zeNqaba yaseStrozzavolpe. Uphahla lomhlaba lulungele iintsapho / amaqela abantu ababini ukuya kwabane, kunye nommandla omalunga ne-80 square metres eyahlulwe yangamagumbi amathathu: igumbi lokulala kumgangatho wokuqala kwindawo ephezulu ejonge kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa, kumgangatho ophantsi, Igumbi. iibhedi ezimbini (ezimbini, ukuba zikho, zinokudityaniswa kwenziwe kabini); igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawari; Igumbi lokuhlala elikhulu elinesofa, indawo yomlilo, iTV, itafile yokutyela kunye nekhitshi eligcweleyo elinazo zonke izixhobo zombane (i-hob yokungenisa, i-oveni yombane, ifriji-ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya) kwaye ixhotyiswe ngayo yonke impahla.
Ifulethi linendawo yabucala yangaphandle phambi komnyango , apho ungadla khona ngaphandle .
4.90 · Izimvo eziyi-144
ICasaJona ikwiLoc. ICastagneto, inqaba encinci yezindlu ezinze kumaphandle aseTuscan nje iikhilomitha ezi-2 ukusuka kumbindi wePoggibonsi, 35km ukusuka eFlorence, 25km ukusuka eSiena kunye ne-13km ukusuka kwiinqaba ezidumileyo zaseSan Gimignano.
Umbuki zindwendwe ngu- Jonatha
Uyamazi umnini-ndawo ekufikeni kwakhe, ohlala kumgama oziikhilomitha ezi-3 uya kuhlala ekhona kuzo naziphi na iimfuno zakho.